1. केहि म्याक प्रयोगकर्ताहरूका लागि जो अहिलेसम्म स्क्रीनशट कसरी लिने भनेर थाहा छैन वा केवल यसलाई स्क्रीनशट कल गर्ने। जो मानिस स्क्रीनशट क्याप्चर गर्न को लागी एक तरीका खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले यो लेख पढ्नु पर्छ .. किनकि पूरै विन्डोज स्क्रिनको तस्विर लिनु वा स्क्रिनको केही अंश तपाईले सोचे जस्तो गाह्रो छैन! म्याकमा स्क्रिनशट कसरी लिने भन्ने सबै महत्त्वपूर्ण कुञ्जीहरू हुन् जुन हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ: ● कमाण्ड ● शिफ्ट3नम्बर ● ● नम्बर ●6नम्बर ● स्पेसबार जसमा यी कुञ्जीहरू प्रयोग हुन्छन्। र यो सबै म्याक मोडेलहरू जस्तै म्याक प्रो, iMac, म्याकबुक, म्याकबुक प्रो, म्याकबुक एयर, म्याक मिनीको साथ कसरी प्राप्त गर्ने। स्क्रिनसटहरू लिनको लागि केहि विधिहरू जारी राखौं। तपाईंले कुन एकै समयमा थिच्नु पर्छ? र के त्यहाँ कुनै ढाँचामा हामी स्क्रीनशट लिन सक्दछौं?
2. छविलाई क्याप्चर गर्नुहोस् जहाँ तपाईं यसलाई चाहानुहुन्छ यस क्षेत्रमा अनुकूलन गर्नुहोस्। थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् र शिफ्ट कुञ्जीहरू थिच्नुहोस् र press नम्बर थिच्नुहोस्। जब एकै समयमा थिच्नु भयो भने तपाईंको म्याकले + चिन्ह देखाउँनेछ, त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् र माउस समात्नुहोस् र इच्छित स्थान तान्नुहोस्। तस्विर जब इच्छित स्थान समाप्त हुन्छ, माउस छोड्नुहोस्, जब हामी विशेष स्थान कब्जा गर्न चाहान्छौं त्यसका लागि उपयुक्त। जब तपाईं "स्न्याप" आवाज सुन्नुहुन्छ, यसको मतलब यो छ कि क्याप्चर पूरा भयो। कब्जा गरिएको छवि तुरून्त डेस्कटपमा भण्डार गरिनेछ।
3. हालको विन्डोको छवि क्याप्चर गर्नुहोस्। आदेश र शिफ्ट कुञ्जी थिच्नुहोस् र समाउन, नम्बर4थिच्नुहोस् र सबै हातहरू छोड्नुहोस्। पछि स्पेसबार (यदि तपाईं स्पेसबार थिच्नुहुन्न भने देखा पर्नेछ) क्यामेरा छवि बनाउँदा। छवि क्याप्चर गर्न इच्छित विन्डोमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन प्रत्येक अनुप्रयोगको एक विशिष्ट विन्डो क्याप्चरको लागि उपयुक्त छ। जब तपाईं "स्न्याप" आवाज सुन्नुहुन्छ, यसको मतलब यो छ कि क्याप्चर पूरा भयो। कब्जा गरिएको छवि तुरून्त डेस्कटपमा भण्डार गरिनेछ।
4. पूर्ण स्क्रिनमा सम्पूर्ण म्याकको स्क्रिनशट लिनुहोस् यो गर्नका लागि प्रेस गर्नुहोस् र आदेश र शिफ्ट कुञ्जी थिच्नुहोस्, त्यसपछि नम्बर press थिच्नुहोस्। यसले पूर्ण स्क्रिन क्याप्चर लिन अनुमति दिनेछ। त्यो स्क्रिनमा खोलिएको सबै कुरा पूर्ण रूपमा प्रदर्शन हुनेछ। उपयुक्त यदि तपाईं सम्पूर्ण स्क्रीन हेर्न चाहनुहुन्छ भने। जब तपाईं "स्न्याप" आवाज सुन्नुहुन्छ, यसको मतलब यो छ कि क्याप्चर पूरा भयो। कब्जा गरिएको छवि तुरून्त डेस्कटपमा भण्डार गरिनेछ।
5. टच बारको साथ आउने म्याकबुक प्रो मोडेलहरूमा टच बारको तस्वीर लिनुहोस्। यदि कोही म्याकबुक प्रो प्रयोग गर्दछ जुन टच बारको साथ आउँदछ, यो अलि उन्नत हुनेछ किनभने म्याकले पनि टच बारको स्क्रिनसट लिन सक्दछ !! वाह। कसरी थिच्ने र कमाण्ड र शिफ्ट कुञ्जी थिच्नुहोस् र the नम्बर थिच्नुहोस् जब तपाईं एक आवाज "स्नाप" सुन्नुहुन्छ मतलब क्याप्चर पूरा भयो। क्याप्चर गरिएको छवि तुरुन्तै डेस्कटपमा भण्डार हुनेछ, अर्को टेक्निक यो सुझाव दिन्छ कि यदि तपाईले क्याप्चर गरिएको छवि तुरून्त सम्पादन गर्न चाहानुहुन्छ भने क्याप समाप्त भए पछि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि म्याकले चित्र डेस्कटपमा सेभ गर्नु अघि हामीलाई देखाउनेछ। यदि तपाईं लेख्न चाहानुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू चिन्ह लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो तुरून्त फिक्स गर्न सकिन्छ, जो कोही म्याक को उपयोग गर्न को लागी अन्य तरिकाहरु जान्न चाहान्छ को लागी धेरै सुविधाजनक, प्रेस र सँगै पछ्याउन नबिर्सनुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग धेरै राम्रा टेक्निकहरू छन्!